Ciudad Real na nnukwu ihe mere ị ga - eji leta ya - Gịnị ka anyị ga - ahụ ebe ahụ? | Njem zuru oke
Ciudad Real bụ obodo dị na Spain nke ndị obodo Castilla-La Mancha. Ozugbo anyị ruru ebe anyị na-aga, otu n’ime nleta ndị mbụ anyị ga-eme bụ Katidral nke Santa María del Prado. Ọ nwere ụdị Gothic na nkọwapụta Renaissance. N'azụ ya bụ Churchka San Pedro, nke bukwa ebe ọzọ iburu n'uche n'ihi na ọ bụ nke kacha ochie na ebe ahụ.
N'ezie, na-ekwu maka ọdịnala na ọtụtụ narị afọ gara aga, mgbe ahụ, anyị enweghị ike ichefu Plaza Mayor. Ọ bụ otu n'ime isi ihe na Ciudad Real. Ọ bụ ebe a ka anyị hụrụ ụlọ nzukọ obodo ochie nke malitere na narị afọ nke XNUMX. N’akụkụ nke ọzọ, mana n’otu ama ahụ, anyị ga-ahụkwa akpụrụ akpụ nke Alfonso X the Wise.
Site na narị afọ nke iri na anọ a maara ya dị ka Puerta de Toledo. Otu n'ime akụkụ ndị fọdụrụ nke Real Alcázar. Bụ otu n'ime ebe ndị kachasị eleta ebe ahụ. N'ezie, otu n'ime ọnụ ọgụgụ ndị dị mkpa dịkwa na mpaghara a. Anyị na-ekwu maka Don Quixote na ụlọ ngosi ihe nka nke raara nye ya. Ọ bụ ihe ngosi nke ọrụ nkà. Na-echezọghị na enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ na nchịkọta ihe ochie.
Kpọtụrụ okike mgbe niile na-eme ka ahụ anyị banye na ezumike miri emi. Ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma…
Ahụkarị ngwaahịa sitere na La Mancha na Valdepeñas
por Ezigbo Ciudad Real eme 10 afọ .
San Borce bụ ụlọ ahịa na-enye ụdị nri niile dị na La Mancha, dị ka chiiz, mmanya, quail, mmanụ oliv, ...
Ihe okwu Carnival pụtara
Mgbe anyị nụrụ okwu carnival n'akụkụ ọ bụla nke ụwa ebe anyị nọ, n'ozuzu ndị otu a na-eme ...
Obodo nta nke Gargantiel
por Ezigbo Ciudad Real eme 11 afọ .
Obere obodo a bu ihe dika ndi bi na 10, ndi a maara dika gargantieleros, na ndi ...
Ahụkarị nri Ciudad
por Ezigbo Ciudad Real eme 12 afọ .
Ngwaahịa nke gastronomy nke Ciudad Real dị iche iche ma dịkwa ezigbo ụtọ. Ezigbo Manchego cheese anaghị adịkarị ...